စှဲလမျးနတော – My Blog
ကြုံတညီ”ရှာကွီးက အိမျခွေ ၇၀၀ နီးပါးရှိပွီး မွို့မကြ တောမကြ ဒိုငျနယျရှာကွီးတရှာ ဖွဈလသေညျ။ရှာကွီးက အရှဖေ့ကျကို မကျြနှာမူ၍တောငျမွောကျသှယျတနျးထားသော ရှာလမျးမကွီးသုံးလမျးရှိလသေညျ။ ရှာဓလအေ့ရ အရှဖေ့ကျဆုံးမှ ရှာလမျးမကွီးဖကျကို အရှပေို့ငျးဟုချေါဝျေါကွပွီး နောကျဖကျဆုံးရှိရှာလမျးမကွီးအပိုငျးကိုတော့ အနောကျပိုငျးဟုချေါ၍ အလယျရှိရှာလမျးမကွီးအပိုငျးကိုတော့အလယျပိုငျးဟု ချေါလသေညျ။ အလယျပိုငျးဟုချေါသော ရှာအလယျလမျးမကွီးတှငျအခွားလမျးမကွီး မြားနညျးတူလူနအေိမျမြားမှာကိုယျ့ခွံကိုယျ့ဝနျးဖွငျ့ဆကျတိုကျတညျရှိနပွေီး တနရောတှငျတော့လူနအေိမျခွံဝနျးနှဈခုကွားတှငျလူနအေဆောကျအဦးမရှိသော မွကှေကျလပျကွီးတခုရှိနလေသေညျ။
ထိုမွကှေကျလပျကွီးမှာ ရှာရှိလူငယျလူရှယျမြားနှငျ့ကလေးမြား ကောငျးစှာအသုံးခခြွငျးကို ခံနရေလသေညျ။လူငယျလူရှယျမြားက ဘောလုံးဘောလီဘော ပိုကျကြျောခွငျး ကစားကွရနျအသုံးပွုသကဲ့သို့ ကလေးမြားကလညျး တုတျစီးထိုး ဖနျခုံ ဒိုးပဈကစားရနျကောငျးကောငျးကွီး အသုံးပွုလကျြရှိလသေညျ။ ကလေးသံမြားက ထိုမွကှေကျလပျတှငျတနကေုနျမစဲတတျ။မှနျးတညျ့ နှငျ့နမှေနျးလှဲကာစ နပွေငျးသောအခြိနျလောကျသာ ကလေးသံစဲတတျသညျ။
ဒါပမေဲ့ လုံးဝကွီး သူတို့အသံမကွားရတော့တာတော့မဟုတျပေ။ ထိုမွကှေကျလပျကွီးဘေးနှဈဖကျတှငျရှိသော လူနခွေံဝနျးမြားမှ သဈပငျရိပျမြားတှငျခိုကပျ၍ ကစားနသေော ကလေးငယျမြားက မပွတျရှိတတျလသေညျ.. ထိုမွကှေကျလပျကွီး၏ မွောကျဖကျတှငျကပျလကျြတညျရှိသော ခွံဝနျးအတှငျးရှိ ထရံကာအိမျမှာ အသကျ၃၀ လောကျရှိသော စနျးရီမ ဆိုသူ၏ နအေိမျဖွဈလသေညျ။ စနျးရီမ ယောကျြားက ကြျောသီဟ ဆိုသူဖွဈပွီး မွို့တှငျသှားရောကျ၍ အလုပျလုပျကိုငျနကော ရှာတှငျမရှိတာကမြားသဖွငျ့ကြျောသီဟ၏နာမညျက မထှကျဘဲသူ့မိနျးမ စနျးရီမ ကိုသာ လူသိမြားရလသေညျ။
စနျးရီမက လူသိမြားတာလဲမပွောနှငျ့သူ့သားဖိုးကုလား အခုလေးနှဈသားရောကျနပွေီဖွဈသျောလညျး အပြိုတုနျးက ကာလသားတှေဝိုငျးဝိုငျးလညျနရေသညျ့အလှအပတှေမှာ တညျရှိနဆေဲဖွဈသညျ။တောသူတောငျသားဘဝ ဖွဈသလို ဝတျစားနထေိုငျကွသျောလညျး စနျးရီမကိုသသေခြောခြာပွငျဆငျလိုကျလြှငျဗှီဒီယို မငျးသမီးလုပျနိုငျသညျဟု တရှာလုံးက ပွောစမှတျပွုကွသညျ။သူမကိုတော့ တိုကျရိုကျမပွောရဲပါ။စနျးရီမ စိတျမထငျလြှငျရနျတှေ့ခံရမညျ။အတုတျခံရမညျဖွဈသညျ။
စနျးရီမကလညျး ဒီလိုစှာလနျကြဲသော မိနျးမစားမြိုးဖွဈလသေညျ။ စနျးရီမ၏လငျဖွဈသူကြျောသီဟက တလကိုတကွိမျလောကျသာ အိမျသို့ပွနျလာလရှေိ့သညျ။တည နှဈညအိပျပွီး ပွနျသှားတတျသညျ။ကြျောသီဟ ရသောလုပျအားခက နှဈအိုးခှဲစားနရေသလိုဖွဈနသေဖွငျ့စနျးရီမတို့သားအမိအတှကျ မလောကျမငှဖွဈရသောကွောငျ့စနျးရီမမှာ သူ့ခွံရှရှေ့ာလမျးမဘေးတှငျဝါးတနျးထိုး၍ မုနျ့ဟငျးခါးရောငျးသညျ။တနကေို့တထောငျလောကျမွတျတော့စနျးရီမတို့သားအမိ ကြျောသီဟပေးသောငှနှေငျ့ပေါငျးကာ ဝတျကာစားကာဖွငျ့တိနျတိနျမွညျနသေညျ။ အခုလညျး ရှာမှ မကျြနှာဖုံး ဦးဘရီ၏ မွေးလေးရှငျပွုရှိသညျ။အလှုရကျက ၄ ရကျမြှသာလိုတော့သညျ။
ဒါကွောငျ့အနောကျပိုငျးရှိအပြိုကွီးမစိနျမှီစကျတှငျ အပျထားသော အဝတျအစားမြားကိုယူရနျစနျးရီမ အိမျမှထှကျလာခဲ့သညျ။စနျးရီမက ပှဲလမျးသဘငျအလှုအတနျးသှားလမေ့ရှိ။အခု ဦးဘရီအလှုမို့သာ မသှားမဖွဈ၍ စီစဉျနရေခွငျးဖွဈလသေည�ျ. ဦးဘရီကလညျး စနျးရီမကို လာဖွဈအောငျလာရနျချေါထားသညျမဟုတျပါလား။ စနျးရီမ အပြိုကွီးမစိနျမှီစကျသို့ထှကျ၍အလာခွံဝရောကျမှတဖကျမွကှေကျသို့ ခေါငျးငှဲ့ကွညျ့လိုကျသညျ။သူ့သားဖိုးကုလား ဘုတျစုတို့အုပျစုနှငျ့ဒိုးပဈနသေညျကို တှေ့လိုကျရသဖွငျ့စိတျခလြကျခြ ထှကျလာခဲ့လတေော့သညျ။
“ဟယျ….မမစိနျ…..အင်ျကြီက ခါးတငျလေးခြုပျထားတယျ….ဒုက်ခဘဲကမြပွောတာ ခါးရှညျလေ…..” စနျးရီမ အက င်္ြီကို ဖွနျ့ကွညျ့ရငျး စိတျပကျြလကျပကျြပွောလိုကျမိသညျ။ “စနျးရီမကလဲ…..အမက ကောငျးမယျထငျလို့လုပျလိုကျတာဟ….ညီးက တငျကားတော့ခါးတငျလေး ဝတျရငျတငျပါးအလှပျေါတာပေါ့ဟဲ့….” “အာ……မမစိနျကလဲ……အဲဒါကွီးကို ဝိုငျးကွညျ့နမှောကွောကျတာ….” “ဘာ….ဘယျလို….ဟငျး..ဟငျး…..ဟငျး….ဟငျး….” “အဟငျး…..ဟငျး….” ပွောရငျးက နှဈယောကျသား တယောကျမကျြနှာတယောကျကွညျ့၍ ရီလိုကျကွမိလသေညျ။
ကဲပါ….အင်ျကြီခြှတျလိုကျပွီး ဝတျကွညျ့လိုကျပါအုံး…..တခါထဲလိုတာရှိလဲလုပျပေးလိုကျရအောငျ….လာ…အထဲကို….” အပြိုကွီးမစိနျမှီချေါရာ အတှငျးခနျးထဲသို့စနျးရီမလိုကျပါလာသညျ။အထဲရောကျတော့ အပျေါမှဝတျထားသော အင်ျကြီကို စနျးရီမက ခြှတျပဈလိုကျသညျ။ “ဟယျ….ငါ့ညီမက ကလေးအမသောဆိုတယျ…..ရငျဘတျကလှတုံးတော့…” စနျးရီမ၏ဘျောလီအင်ျကြီထဲမှ ပွညျ့တငျး၍ အဈထှကျနသေော တငျးတငျးရငျးရငျးရငျသားအစုံကိုကွညျ့ရငျး မစိနျမှီက ပွောသညျ။ “ဖိုးကုလားဘဲ……လေးနှဈထဲရောကျနပွေီ…..နောကျပွီး ကိုစိနျဦးကလဲဒီမှာနတောမှ မဟုတျတာ….” “….ဘာဆိုငျလို့လဲအေ့…..” “မမစိနျတို့အပြိုကွီးတှေ…….မသိပါဘူး…..” “ထားပါတော့…..ထားပါတော့….ကဲပါ…..အင်ျကြီကိုဝတျလိုကျပါအုံး…” တောသူတောငျသားလဲဖွဈအပြိုကွီးလဲဖွဈသော မစိနျမှီတဈယောကျဒီလောကျပငျ ရိုးအလှသညျ။အပြိုကွီးမစိနျမှီစကားအဆုံး စနျးရီမက လကျထဲမှအက င်္ြီအသဈလေးကို ကောကျ၍ ဝတျလိုကျလတေော့သညျ။
…..ဟေ့……သံခဲ…..” “….ဘာလဲကှ…..ခှေးလေး….” “မငျးသိပွီးပွီလား……ဦးဘရီကွီး မိနျးမယူတော့မယျဆိုတာ…..” ဒီစကားသံသဲ့ကနဲကွားလိုကျရတော့ ခွံစညျးရိုးအနီးအဝတျထိုငျလြှျောနသေော စနျးရီမက ဘေးမှမွကှေကျလပျဖကျသို့လှညျ့ကွညျ့လိုကျမိသညျ။ မွကှေကျလပျထဲတှငျအသကျဆယျ့သုံးလေးနှဈခနျ့ရှိသော ကောငျလေးသုံးယောကျခွံစညျးရိုးဘေး သဈပငျရိပျတှငျထိုငျကာ လောကျစာလုံး လုံးနကွေသညျ။ “ခှေးလေးရာ…..ဟုတျမှလဲ…..လုပျပါကှာ…..ဦးဘရီကွီးကအသကျလဲကွီးလှပွီဥစ်စာ….နောကျပီး သူ့မွေးကိုတောငျဟိုနကေ့ဘဲသက င်ျနျးစညျးလိုကျသေးတာ…” “မဟုတျဘူး……သံခဲရ….ဦးဘရီက အသကျငါးဆယျလောကျဘဲရှိသေးတာ…
ငါ့အဖနေဲ့ အသကအြတူတူဘဲကှ…..” ဒီတခါဝငျပွောလိုကျတာက သူတို့နှဈယောကျလုံးရနျရှံ့တုံးလေးတှေတပေေးနသေူ ခကျြစူဖွဈသညျ။ “မငျးကို….ဘယျသူကပွောလို့လဲ…..ခှေးလေးရ……” ဒီမေးခှနျးကွားလိုကျရတော့….ဆတျကနဲခေါငျးထောငျကာ နားစှငျ့လိုကျသူကတော့ စနျးရီမပငျဖွဈလသေညျ။ “….မနကေ့ ငါတို့အိမျကို ဦးဘရီကွီးလာတယျကှ….ပွီးတော့ သူအိမျထောငျပွုတော့မယျဆိုတဲ့အကွောငျး….ငါ့အဖိုးကိုပွောတာ….ငါကွားလာခဲ့ရတာ …သံခဲရ….” “မငျးအဖိုးကို……သူကဘာကိစ်စလာပွောရတာတုံး….” ရှာက အလယျတနျးကြောငျးမှာ ခုနှဈတနျးရောကျနပွေီဖွဈသော သံခဲက စစေ့စေ့ပျစပျမေးသညျ။
“အဖိုးက ငါတို့ကိုတခါကပွောဖူးတယျ……သူတို့ဒီရှာကို ငယျငယျကပွောငျးလာကွတုံးက အဲဒီဦးဘရီကွီးရဲ့အဖနေဲ့ အတူတူလို့ပွောတယျ…..အရငျကလညျးဝါကြှတျရငျဦးဘရီက အဖိုးကို လာလာကနျတော့တယျကှ……..” ခှေးလေး၏စကားကွောငျ့သံခဲက ဘာမှအတှနျ့မတကျတော့ပမေဲ့ဘေးမှ ခကျြစူက ဝငျ၍မေးသညျ..ဦးဘရီက ဘယျသူကိုယူမှာမို့လဲကှ…..” ဒီစကားကွားတော့စနျးရီမလကျထဲက အဝတျကိုဇလုံထဲပဈခကြာ ကောငျလေးတှေရှိရာ ဖကျလှဲ့၍ သသေခြောခြာ နားထောငျလိုကျသညျ။ “ငါပွောလိုကျရငျ……မငျးတို့အံ့သွသှားမှာဘဲ….” “ပွောမှာသာပွောစမျးပါကှာ…..” “ဦးဘရီနဲ့ယူမှာက ဟိုအပြိုကွီး မစိနျမှီလကှော…..”
“….ဟငျ…” ဒီတခါ ‘ ဟငျ‘ လိုကျတာက စနျးရီမဖွဈပွီး ဟငျကနဲ အာမဋေိတျသံပွုကာ ဆတျကနဲထ၍ အိမျပျေါသို့တကျသှားလတေော့သညျ။ ကလေးတှေစကားမို့ယုံရတာခကျပမေဲ့ယုံခငျြစရာကောငျးအောငျလညျး အကွောငျးအခကျြက ခိုငျလုံနလေသေညျ။ ဒါကွောငျ့ဒီလူကွီး အလှုမတိုငျမီတပတျလောကျထဲက မတှေ့တော့တာ။အခုအလှု ပွီးလို့ငါးရကျထိပငျဖွဈသညျဟု စနျးရီမတှေးလိုကျမိသညျ။ပွီးတော့ ဟုတျမဟုတျကိုလညျး ဆကျ၍စုံစမျးကွညျ့ရနျစနျးရီမ စိတျကူးလိုကျမိလသေညျ နောကျတနမေ့နကျ…“စနျးရီမ မုနျ့တပှဲအကွျောမထညျ့နဲ့…..” စနျးရီမ ဟငျးရညျအိုးမှနေရောက လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့အသကျ၅၀ လောကျရှိသော ဒျေါညှနျ့ဆိုသူဖွဈကွောငျး တှေ့လိုကျရသညျ။
အသံကွား၍ မုနျ့စားနသေော မမွိုငျဆိုသော မိနျးမကွီးကလညျး ဒျေါညှနျ့ကိုလှညျ့ကွညျ့လိုကျသညျ..“…..မညှနျ့…..ဘယျကလှညျ့လာတာလဲ….” “အျော………ဘယျသူမြားလဲလို့မမွိုငျကိုး……” ပွောလဲပွော မမွိုငျဘေး ဝါးတနျးလြားတှငျဒျေါညှနျ့ကဝငျထိုငျသညျ။ “ရော့…….အဒျေါ…….မုနျ့ပနျးကနျ…..” စနျးရီမ လှမျးပေးလိုကျသော မုနျ့ဟငျးခါးပနျးကနျကိုလှမျးယူပွီး ဒျေါညှနျ့က မမွိုငျဖကျသို့ လှညျ့၍ကွညျ့သညျ။
“……မမွိုငျ……နငျကိုဘရီသတငျးကွားပွီးသှားပွီလား….” စနျးရီမ ရငျတှေဒိနျးကနဲခုနျသှားသညျ။ “…..ဘာကွားရမှာတုနျး….မညှနျ့ရ….မနကေ့တငျသူ့သားခငျအောငျအိမျက ထှကျလာတာ…..တှေ့လိုကျရသေးတယျ……” “…..ဘရီက စိနျမှီနဲ့…..ယူမလို့တဲ့အေ့……” “……ဟေ…..ဟုတျလို့လား…..” မမွိုငျပါးစပျနားရောကျနသေော မုနျ့ဇှနျးကို ပနျးကနျထဲသို့ပွနျ၍ခလြိုကျသညျ။ပွီးမှ မမွိုငျက မုနျ့ဇှနျးကိုပွနျကိုငျလိုကျပွီး….. “….တပငျလဲလို့တပငျထူတာပဲအေ….ဘရီမိနျးမ အေးတငျဆုံးတာတောငျ ဆယျနှဈလောကျရှိပွီဘဲ…..” “….မမွိုငျရာ….ဒီအရှယျကွီးကမြှ….မယူဘဲနလေိုကျတော့ဘာဖွဈမှာမို့လဲ….” “…..အျော….အသကျကွီးတော့လဲ….ဆေးပေးမီးယူပေါ့အေ့….” ‘ဒငျးတော့နဦေးပေါ့’ ဟု စိတျထဲမှ ကွုံးဝါးရငျး စနျးရီမက မုနျ့ဟငျးခါးဟငျးရညျအိုးအဖုံးကို ဂြိုငျးကနဲမွညျအောငျပိတျလိုကျလတေော့သညျ။ သနျးခေါငျကွကျတှနျပွီ။စနျးရီမ မအိပျသေးပါ။
အိပျမပြျောသညျမဟုတျ။တမငျကို မအိပျသေးတာဖွဈသညျ။သညျလိုဘဲသနျးခေါငျကြျောအောငျမအိပျဘဲနခေဲ့တာ တပတျကြျောပပွေီ။ အခုသနျးခေါငျရောကျပွီဆိုတော့စနျးရီမအိပျပဈလိုကျရနျ စဉျးစားလိုကျခိုကျမှာပငျ‘ဖေါကျ’ဆိုသော အသံလေးတဈခကျြအိမျရှမှေ့ ကွားလိုကျရသညျ။ စနျးရီမ အိပျယာမှလူးလဲထကာ ဘေးတှငျအိပျပြျောနသေော သားဖွဈသူ ဖိုးကုလားကို ကွညျ့လိုကျသညျ။တနလေုံ့း ဆော့ခငျြတိုငျးဆော့ထားသဖွငျ့ အိပျမောကနြသေညျ။စနျးရီမ အသာထ၍ အိမျရှသေို့ထှကျလာခဲ့သညျ။ပွီးတော့ အိမျရှတေံ့ခါးကိုဖှငျ့လိုကျပွီး ဘေးသို့အသာကပျ၍ လမျးဖယျပေးခိုကျလူတဈယောကျ အိမျထဲသို့လှဈကနဲဝငျလာသညျ။ စနျးရီမ တံခါးနှဈခပျြကို ပွနျစကေ့ာ ပိတျရငျးအိမျရှတေံ့ခါးပေါကျနားရှိ စဥျ့အိုးပျေါတှငျတငျထားသော ဒနျရဖေလားကို ကွညျ့လိုကျမိသညျ။
စောစောက ဖေါကျဆိုသောအသံကထိုရဖေလားကိုလကျဖွငျ့ခပျပွငျးပွငျး တောကျလိုကျသောအသံဖွဈလသေညျ။ စနျးရီမ တံခါးကိုပွနျပိတျလိုကျပွီး နောကျသို့အလှညျ့အထဲသို့ရောကျနပွေီ ဖွဈသော ဦးဘရီက သူမ၏ပုခုံးကိုလှမျးဖကျလိုကျသညျ။ “…..ဘာလုပျတာလဲ…….ဖယျပါ….” စနျးရီမက လကျဖွငျ့အသာပုတျခလြိုကျပွီး ဖိနပျခြှတျမှနေ၍ အိမျပျေါသို့လှမျးတက�ျ.သှားတော့ဦးဘရီကလညျး နောကျကလိုကျလာခဲ့သညျ။စနျးရီမ၏ မပကျြစီးသေးသော နောကျပိုငျးအလှကို အာသာငမျးငမျးကွညျ့၍ နောကျမှလြှောကျလာခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။…..စနျးရီ…..နငျက ဘယျလိုဖွဈတာလဲ….” “…..ဘာဖွဈရမှာလဲ…..ရှငျလုပျတာရှငျသိမှာပေါ့….” ပွောရငျး စနျးရီမက အိမျရှခေ့နျးတှငျပငျရပျ၍ ဦးဘရီကို မကျြနှာခငျြးဆိုငျလိုကျသညျ။
“…..နငျကလဲဟာ…ဘာဖွဈရတာတုနျး…..ငါဘာလုပျမိလို့တုနျး……အပြိုကွီး မစိနျမှီကို….ယူတော့မလို့ဆို……” ဦးဘရီရငျထဲက အလုံးကွီးကသြှားပုံဖွငျ့ ပွုံးလိုကျသညျ။စနျးရီမ၏မကျြနှာကတော့ သုနျမှုနျစူပုတျ၍ေ.ဘာ….ဒါဆိုကမြဆီမလာနဲ့တော့…..မမစိနျဆီကိုသာသှား….…အျော…….စနျးရီက သဝနျတိုနတောကိုး……ရှငျ့ကိုမြား…..ကမြက…သဝနျတိုနမှောလား….ဝေးသေး…..ဒါဆို….ငါ…စိနျမှီကိုယူမှာ နငျမကွိုကျဘူးပေါ့…..…ဘယျသူက မကွိုကျဖူးပွောလဲ…..ဒါဆို…..ဘာလို့….နငျ့ဆီမလာနဲ့လို့ပွောရတာလဲ…….ရှငျ့မှာ…..မမစိနျ….ရှိနပွေီဘဲ…..ငါက….စိနျမှီကိုသာယူမှာ….ဒါပမေဲ့….ငါက နငျ့ကိုဘဲစှဲလနျးနတောဟ….. သူနဲ့ယူပွီးလဲ…..နငျ့ဆီလာနမှောဘဲ……ဒါဆိုလဲ……ဘာလို့ယူရသေးလဲ…..” စနျးရီမ၏ဒေါသသံက တပွားသားမှလြှော့၍ မသှားပေ။
အမှနျတော့ဦးဘရီက မုဆိုးဖို။စနျးရီမက ကြျောသီဟဆိုသော လငျကွီးငုတျတုတျနဲ့ဖွဈပွီး။သူတို့နှဈယောကျဖွဈနကွေတာက တဈနှဈနီးပါးရှိပွီ။ လှသော စနျးရီမကို ကွောငျဖါးကွီးဦးဘရီက ကွံသညျ။လငျသားနှငျ့ဝေးနသေော စနျးရီမက ဦးဘရီ၏ညှတျကှငျးထဲဝငျခဲ့ရခွငျးဖွဈလသေညျ။အခုတော့ဦးဘရီက အပြိုကွီး မစိနျမှီကိုယူတော့မညျဆို၍ မကမြေနပျဖွဈနရေခွငျးဖွဈလသေညျ။ မိနျးမတှေမြား သူ့မှာလငျကွီးငုတျတုတျနှငျ့ကိုတဖကျသားကဘာမှမပွောရှာပမေဲ့ တဖကျသားကတြော့သဝနျကွောငျတတျကွလသေညျ။ “…..အသကျကွီးလာတော့ဆေးပေးမီးယူပေါ့ဟာ…..ကဲ…..ရှငျ…ပွနျပါတော့…….စနျးရီမ….ဒါဆိုငါတဈခုပွောမယျ…ငါနငျ့ကိုယူမယျ…..ကြျောသီဟကိုကှာပွီး….ငါ့ကို ယူမလား…….ဘာ….ရှငျ့….” စနျးရီမ သိသိသာသာငိုငျကသြှားသညျ။ခကျထနျစူပုတျနသေော မကျြနှာထားက သိသိသာသာကွီး လြော့ကသြှားသညျ။
ဦးဘရီကိုကွောငျ၍ကွညျ့နရေငျးမှ သူ့မကျြလုံးအကွညျ့က ကွမျးပွငျဆီသို့ငိုကျကသြှားသည�ျ.. စနျးရီမ အရှိုကျထိသှားပပွေီ။ငွိမျကသြှားသော စနျးရီမကိုဦးဘရီက ရငျခှငျထဲဆှဲသှငျးပွီး ပါးလေးနှဈဖကျကိုမှေးကွူလိုကျသညျ။ “…..ဘယျနှယျ့လဲ…..စနျးရီမ…..အကိုကွီး…..နငျ့ကိုယူမယျလေ….” ဦးဘရီ၏ရငျခှငျကွီးကို စနျးရီမ မကျြနှာလေးအပျပွီး ဘာသံမှထှကျမလာ။ ကြျောသီဟကိုသူမကှာပွီး ဦးဘရီကိုသူမယူလိုကျလြှငျဆှေမြိုးအားလုံးနှငျ့ ပတျဝနျးကငျြတခုလုံးကို ရငျဆိုငျရမညျ။သားက ပထှေးနဲ့နရေမညျ။ပွောမဲ့သာ ပွောရသညျ။ကြျောသီဟကိုသူကှာဖို့ရာလှယျပါ့မလား။လှယျတယျဘဲထားအုံး။ ဦးဘရီနောကျသူပါသှားလြှငျဦးဘရီဘကျက အမြိုးတှေက သူမကိုစကျဆုပျစှာ ဆကျဆံကွမညျ။စသညျ….စသညျဖွငျ့အတှေးသံသရာထဲရောကျနခေိုကျ လကျသှကျသောဦးဘရီက သူမ၏နို့အုံတဖကျကိုလကျဖွငျ့အုပျ၍ညှဈရငျး သူမကို လကျတဖကျဖွငျ့ဖကျထားရာမှ ကွမျးပွငျပျေါသို့ထိုငျခလြိုကျသညျ။ အလိုကျသငျ့လေး ကွမျးပွငျပျေါထိုငျခလြိုကျအပွီး စနျးရီမက တဆကျတညျးပကျလကျ လှနျခလြိုကျသညျ။
ဦးဘရီက ပကျလကျလေးဖွဈနသေော စနျးရီမ၏ပေါငျတံကွီးတှေကို ထဘီပျေါမှပငျလိုကျလံဆုတျနယျပှတျသပျနခေိုကျစနျးရီမက သူမ၏ကိုယျအပျေါပိုငျး ကရငျစအေ့င်ျကြီကို ကွယျသီးမြားဖွုတျကာ အောကျမှဘျောလီအကြ င်္ီကို ဆှဲလှနျတငျလိုကျတော့ဝငျးမှညျ့နသေော နို့ကွီးနှဈလုံးက ထှကျပျေါလာတော့ရာ ဦးဘရီက ငုံ့၍အငမျးမရစို့သညျ။စနျးရီမ မကျြလုံးလေးမြားမှိတျ၍ငွိမျနသေညျ။ ဒီအတှေ့ ဒီအရသာကိုသူမတောငျ့တမြှျောလငျ့နခေဲ့ရသညျမဟုတျပါလား။ ဦးဘရီက စနျးရီမ၏ နို့သီးခေါငျးလေးကို နှုတျခမျးဖြားဖွငျ့ညှဈ၍ ထိပျကို လြှာဖြားလေးဖွငျ့ထိုးရငျးက စနျးရီမ၏ထဘီကိုလှနျတငျလိုကျသော သူ့လကျကို စနျးရီမက လကျတဖကျဖွငျ့အုပျ၍ဆုပျကိုငျလိုကျလသေည�ျ. “…..အကိုကွီး…..စနျးရီကို….ပွဈမထားရဘူးနျော….” ဦးဘရီက နို့သီးကိုနှုတျခမျးဖြားမှ မလှတျခေါငျးငွိမျ့ပွသညျ။ဒီတော့မှ စနျးရီမက သူ့လကျကိုလှတျပေးလိုကျရာ ထဘီကိုဆကျ၍လှနျတငျလိုကျသညျ။
အုံကောငျးသော အမှေးနကျမြားကိုလကျဖဝါးဖွငျ့ပှတျလိုကျတော့ ဇီးကငျးလောကျစောကျစလေ့ေးက ထငျးကနဲပေးလာသညျ။လကျညှိုးထိပျလေးဖွငျ့ ဦးဘရီတို့ထိလိုကျသညျ။စနျးရီမ တှနျ့ကနဲတခကျြဖွဈသှားပွီး စအိုလေးကို ရှုံ့လိုကျမိသညျ။ စောကျစလေ့ေးက ပြော့၍မနေ။မာ၍ တောငျ့တောငျ့လေးဖွဈနသေညျ။ ဆကျပွီး အောကျဖကျကိုလကျဖဝါးထိုး၍ပှတျလိုကျတော့ တငျးတငျးလေးဖေါငျးနသေော နှုတျခမျးသားနှဈခုကွားမှအရညျကွညျလေးတှေက စို့ထှကျနကွေပွီ။ ဦးဘရီပုဆိုးကိုခေါငျးပျေါမှ လှနျခြှတျလိုကျတော့စနျးရီမ မကျြလုံးအစုံက ဝငျးကနဲလကျသှားသညျ။ဦးဘရီအသားက မမဲပမေဲ့လီးကွီးက မဲမဲကွီး ထောငျထနသေညျ။၉၀ ဒီဂရီတော့မတျ၍မနပေါ။အသကျအရှယျရနပွေီမို့၄၅ ဒီဂရီလောကျတော့ထောငျ၍နသေညျ။ဒါပမေဲ့ဒါကွီးက ဘယျလောကျမာကြောကွောငျး စနျးရီမ ကောငျးကောငျးသိသညျ။
စံခြိနျမှီအောငျမထောငျနိုငျပမေဲ့စံခြိနျမှိအောငျတော့ မာကြောလှသညျ။ “……ခါတိုငျးလိုဘဲ…..မှောကျပေးပါလားဟာ…..” “…….အို…..အကိုကွီးကလဲ….မလုပျတာကကွာပွီး…..လုပျလုပျခွငျးမှောကျလိုကျရငျ…. တအားနာတာဘဲ…ပကျလကျပဲစလုပျလိုကျအုံးနျော…..” ပွောလဲပွော စနျးရီမက ပေါငျနှဈဖကျကိုကား၍ပေးလိုကျတော့ဦးဘရီက ပေါငျကွားထ�ဲ ဝငျကာ နရောယူလိုကျပွီး အမောတကော လီးထိပျကိုစောကျပတျနှုတျခမျးသားနှဈခု ကွားသို့ထောကျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့စနျးရီမ၏မကျြနှာလှလှလေးကိုလှမျးကွညျ့၏ ဒီလိုကွညျ့မှနျးသိတော့မကျြတောငျကော့ကွီးတှေခတျရငျး သူ့ကို ပွုံးယောငျယောငျလေး မကျြစောငျးတခကျြထိုးကာ တဖကျသို့လှညျ့သှားသညျ။ နရေငျးထိုငျရငျး တရှုးရှုးဖွငျ့အသကျရှုပွငျးလာသော ဦးဘရီက လီးထိပျကို ဗွုံးကနဲဖိသှငျးလိုကျသညျ။
…ဗွဈ…..ဒုတျ……..အ…..ဟ……ဟငျ… စနျးရီမ လညျပငျးကွောလေးတှေထောငျတကျသှားပွီး ဗွုံးကနဲ အသကျအောငျ့လိုကျရာ မှ ‘ဟငျး’ ကနဲသကျပွငျးခလြိုကျသညျ။ ဦးဘရီ၏လီးကတော့စနျးရီမ၏စောကျခေါငျးထဲတဆုံးဝငျ၍သှားခပြွေီ။ဦးဘရီက လီးကို အကုနျဆှဲမထုတျတဝကျလောကျထုတျထုတျပွီး အားပါးတရဆောငျ့၍လိုးသညျ။ ပွီးတော့လကျတဖကျက စနျးရီမ၏ဘေးတှငျထောကျထားပွီး ကနျြလကျတဖကျက စနျးရီမ၏နို့တလုံးကိုဆုပျနယျပေးသညျ။ စနျးရီမအလိုးခံရငျး မခငျြ့မရဲဖွဈလာပွီး ကားထားသောခွထေောကျနှဈဖကျမှ ခွသေလုံးနှဈဖကျကို ဒူးထောကျထားသော ဦးဘရီ၏ဒကောကျခှကျသို့လှမျးခြိတျ၍ အားယူကာ စောကျပတျကို ကော့ကော့တငျသညျ။ညှဈသညျ။
ဦးဘရီအရသာတှေ့လာပွီး အားကွိုးမာနျတကျဆောငျ့သညျ။ …..စနျးရီ……ဘာလဲ……မှောကျပေးတော့ဟာ……..အာ…ဒီမှာ…အသားကနြတေဲ့ဟာ….…လုပျပါဟာ…..နငျ့ဖငျကွီးကိုကုနျးပွီး…..လုပျခငျြလို့ပါ……အကိုကွီးကလဲ…ဒီမှာက….ကဲပါ….ဖယျ……” စနျးရီမ သိပျပွီးစိတျမရှညျနိုငျတော့ပေ။ဦးဘရီက စောကျခေါငျးထဲမှလီးကိုထုတျကာ နောကျသို့အဆုတျလိုကျစနျးရီမက ဆတျကနဲဝမျးလြားမှောကျလိုကျပွီး ကုနျး၍ထသညျ။ခန်ဓာကိုယျရှပေို့ငျးကတော့လကျကိုဆနျ့၍မထောကျဘဲတတောငျဆဈဖွငျ့သာ အားပွုကာထောကျထားလရော ကိုယျအရှပေို့ငျးက နိမျ့၍ နောကျဖကျဖငျသားဖှေးဖှေးကွီးတှေက လုံးတဈကားစှငျ့၍ မွငျ့တကျကာ အတျောပငျ မကျမောစရာကွီးဖွဈနသေညျ။
ဒါ့အပွငျစောကျပတျနှုတျခမျးသားဖေါငျးဖေါငျးကွီးတှေက စူ၍ထှကျနပွေနျတော့ဦးဘရီတယောကျဘဝငျခိုကျ၍ ရှသေို့ဗွုံးကနဲ တိုးကာ ဖငျကွီးကို လကျနှဈဖကျနှငျ့စုံကိုငျလိုကျသညျ။ “….လုပျမှာ…လုပျလေ…အကိုကွီးရာ…..” စနျးရီမက သံရှညျမွှငျးမွှငျးလေးဆှဲ၍ ညုပွောလေးပွောကာ ဖငျလုံးကွီးကိုလညျး တခကျြလှုပျလိုကျသညျ။ ဦးဘရီလကျတဖကျက စနျးရီမ၏ခါးကိုကိုငျပွီး၊ကနျြလကျတဖကျက သူ့လီးကိုကိုငျပွီး နောကျသို့စူထှကျနသေော စောကျပတျနှုတျခမျးသားနှဈခုကွားသို့လီးကိုတကေ့ာ ဆောငျ့သှငျးလိုကျသညျ။
“…….ဗွဈ…..ဖှတျ…ဖှတျ…..အမေ့…..ဟငျး…..အရမျးကွီးဘဲ….ကြှတျ….ကြှတျ……” “…….နာလို့လား….စနျးရီ…….” “……ကဲပါ……လုပျမှာသာလုပျစမျးပါ….” ဟုတျတယျလေ။စိတျမရှညျနိုငျတော့ဘူး။စောစောကအရသာတှေ့နတေုနျး သူမကို မှောကျခိုငျး၍လီးခြှတျလိုကျရတော့အရသာပကျြသှားသညျ။အခုလညျး ဇိမျဆှဲနသေညျ။ ဦးဘရီက စနျးရီမ၏ခါးကိုဆှဲ၍ ဆှဲ၍ဆောငျ့လိုးသညျ။စနျးရီမကလညျး ဖငျကွီးကိုလုံးကဈြ၍ နောကျသို့ထိုးထိုးပေးရုံမြှမက အားနှငျ့လညျး ရသမြှညှဈညှဈ ပေးသညျ။ဦးဘရီကတော့သဘောတှေ့မနောခှနေ့သေညျ။ ဒါကွောငျ့လဲတခုလပျနဲ့အပြိုစငျဘယျဒငျးသာလို့ဟနျလို့ဆိုတာပေါ့လို့ ဦးဘရီတှေးမိသညျ။စနျးရီမက တခုလပျမဟုတျပမေဲ့လီးအကွောငျးကို ကောငျးကောငျးသိ၏။ဘယျလိုခံရမညျကိုသိနသေောသူဖွဈသညျ။
“……ပလှတျ…..ပလှတျ…..ဖှတျ….ဒုတျ….အငျ့….အငျ့…အ….အား… …ပလှတျ….ဇှတျ…..ဗှတျ……ဗွဈ…..အငျ့…..ပလှတျ……….” “……ကောငျးလား…..စနျးရီ….” “…..မမေးနဲ့လို့ပွောထားတာမမှတျမိဘူးလား……” ဦးဘရီအသံတိတျကာ အံကွိတျပွီး အားပါးတရခါးကိုကိုငျကာဆောငျ့၍လိုးသညျ။ ဆောငျ့အားကွောငျ့တုနျတုနျသှားသော စနျးရီမ၏ဖငျသားလုံးမြားကိုကွညျ့ရငျး ဦးဘရီမှာစောကျပတျညှဈအားကလညျး ကောငျးလှသညျမို့ ပွီးခငျြစိတျပေါကျလာသညျ။ထိုအခိုကျမှာပငျစနျးရီမကလညျး ရှဖေ့ကျကထောကျထားသော တတောငျဆဈနှဈဖကျ ကိုကြားကနျ၍ထောကျကာ ဖငျကွီးကိုနောကျသို့ပဈကာ တနျပွနျဆောငျ့ကာ သိသိသာသာကွီး ပွနျဆောငျ့ပေးလာသညျ။
စနျးရီမပွီးခါနီးလြှငျဒီအတိုငျးဖွဈလာတတျသညျကို ဦးဘရီက သိပွီးသား။ သူကလညျး ပွီးခငျြလာပွီမို့မကျြလုံးကိုစုံမှိတျပွီး စနျးရီမ၏ခါးကိုညှဈကာ အသာကုနျ အခကျြ(၂၀)မြှ ဆကျတိုကျကွီးဆောငျ့လိုကျပွီး သုတျရမြေားကို စနျးရီမ၏စောကျခေါငျး ထဲသို့ပနျးသှငျးလိုကျစဉျစနျးရီမ၏စောကျပတျအတှငျးမှ ကွှကျသားမြားကလညျး ဦးဘရီ၏လီးထိပျကွီးကို ဝိုငျးဝနျးညှဈလိုကျလတေော့သညျ။ဦးဘရီလီးတနျကွီးကို တခကျြ၊နှဈခကျြမြှ ဆောငျ့လိုကျ၍စနျးရီမ၏လကျနှဈဖကျမှာလညျး ကှေးကနဲ ဖွဈသှားပွီး သူမ၏ကိုယျကွီးမှာ ရှသေို့တိုး၍ကွမျးပွငျပျေါသို့ ငွိမျ့ကနဲမှောကျလကျြ ကသြှားပါတော့သညျ…..ပွီး။
ကျုံတညီ”ရွာကြီးက အိမ်ခြေ ၇၀၀ နီးပါးရှိပြီး မြို့မကျ တောမကျ ဒိုင်နယ်ရွာကြီးတရွာ ဖြစ်လေသည်။ရွာကြီးက အရှေ့ဖက်ကို မျက်နှာမူ၍တောင်မြောက်သွယ်တန်းထားသော ရွာလမ်းမကြီးသုံးလမ်းရှိလေသည်။ ရွာဓလေ့အရ အရှေ့ဖက်ဆုံးမှ ရွာလမ်းမကြီးဖက်ကို အရှေ့ပိုင်းဟုခေါ်ဝေါ်ကြပြီး နောက်ဖက်ဆုံးရှိရွာလမ်းမကြီးအပိုင်းကိုတော့ အနောက်ပိုင်းဟုခေါ်၍ အလယ်ရှိရွာလမ်းမကြီးအပိုင်းကိုတော့အလယ်ပိုင်းဟု ခေါ်လေသည်။ အလယ်ပိုင်းဟုခေါ်သော ရွာအလယ်လမ်းမကြီးတွင်အခြားလမ်းမကြီး များနည်းတူလူနေအိမ်များမှာကိုယ့်ခြံကိုယ့်ဝန်းဖြင့်ဆက်တိုက်တည်ရှိနေပြီး တနေရာတွင်တော့လူနေအိမ်ခြံဝန်းနှစ်ခုကြားတွင်လူနေအဆောက်အဦးမရှိသော မြေကွက်လပ်ကြီးတခုရှိနေလေသည်။
ထိုမြေကွက်လပ်ကြီးမှာ ရွာရှိလူငယ်လူရွယ်များနှင့်ကလေးများ ကောင်းစွာအသုံးချခြင်းကို ခံနေရလေသည်။လူငယ်လူရွယ်များက ဘောလုံးဘောလီဘော ပိုက်ကျော်ခြင်း ကစားကြရန်အသုံးပြုသကဲ့သို့ ကလေးများကလည်း တုတ်စီးထိုး ဖန်ခုံ ဒိုးပစ်ကစားရန်ကောင်းကောင်းကြီး အသုံးပြုလျက်ရှိလေသည်။ ကလေးသံများက ထိုမြေကွက်လပ်တွင်တနေကုန်မစဲတတ်။မွန်းတည့် နှင့်နေမွန်းလွဲကာစ နေပြင်းသောအချိန်လောက်သာ ကလေးသံစဲတတ်သည်။
ဒါပေမဲ့ လုံးဝကြီး သူတို့အသံမကြားရတော့တာတော့မဟုတ်ပေ။ ထိုမြေကွက်လပ်ကြီးဘေးနှစ်ဖက်တွင်ရှိသော လူနေခြံဝန်းများမှ သစ်ပင်ရိပ်များတွင်ခိုကပ်၍ ကစားနေသော ကလေးငယ်များက မပြတ်ရှိတတ်လေသည်.. ထိုမြေကွက်လပ်ကြီး၏ မြောက်ဖက်တွင်ကပ်လျက်တည်ရှိသော ခြံဝန်းအတွင်းရှိ ထရံကာအိမ်မှာ အသက်၃၀ လောက်ရှိသော စန်းရီမ ဆိုသူ၏ နေအိမ်ဖြစ်လေသည်။ စန်းရီမ ယောက်ျားက ကျော်သီဟ ဆိုသူဖြစ်ပြီး မြို့တွင်သွားရောက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကာ ရွာတွင်မရှိတာကများသဖြင့်ကျော်သီဟ၏နာမည်က မထွက်ဘဲသူ့မိန်းမ စန်းရီမ ကိုသာ လူသိများရလေသည်။
စန်းရီမက လူသိများတာလဲမပြောနှင့်သူ့သားဖိုးကုလား အခုလေးနှစ်သားရောက်နေပြီဖြစ်သော်လည်း အပျိုတုန်းက ကာလသားတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေရသည့်အလှအပတွေမှာ တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။တောသူတောင်သားဘဝ ဖြစ်သလို ဝတ်စားနေထိုင်ကြသော်လည်း စန်းရီမကိုသေသေချာချာပြင်ဆင်လိုက်လျှင်ဗွီဒီယို မင်းသမီးလုပ်နိုင်သည်ဟု တရွာလုံးက ပြောစမှတ်ပြုကြသည်။သူမကိုတော့ တိုက်ရိုက်မပြောရဲပါ။စန်းရီမ စိတ်မထင်လျှင်ရန်တွေ့ခံရမည်။အတုတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
စန်းရီမကလည်း ဒီလိုစွာလန်ကျဲသော မိန်းမစားမျိုးဖြစ်လေသည်။ စန်းရီမ၏လင်ဖြစ်သူကျော်သီဟက တလကိုတကြိမ်လောက်သာ အိမ်သို့ပြန်လာလေ့ရှိသည်။တည နှစ်ညအိပ်ပြီး ပြန်သွားတတ်သည်။ကျော်သီဟ ရသောလုပ်အားခက နှစ်အိုးခွဲစားနေရသလိုဖြစ်နေသဖြင့်စန်းရီမတို့သားအမိအတွက် မလောက်မငှဖြစ်ရသောကြောင့်စန်းရီမမှာ သူ့ခြံရှေ့ရွာလမ်းမဘေးတွင်ဝါးတန်းထိုး၍ မုန့်ဟင်းခါးရောင်းသည်။တနေ့ကိုတထောင်လောက်မြတ်တော့စန်းရီမတို့သားအမိ ကျော်သီဟပေးသောငွေနှင့်ပေါင်းကာ ဝတ်ကာစားကာဖြင့်တိန်တိန်မြည်နေသည်။ အခုလည်း ရွာမှ မျက်နှာဖုံး ဦးဘရီ၏ မြေးလေးရှင်ပြုရှိသည်။အလှုရက်က ၄ ရက်မျှသာလိုတော့သည်။
ဒါကြောင့်အနောက်ပိုင်းရှိအပျိုကြီးမစိန်မှီစက်တွင် အပ်ထားသော အဝတ်အစားများကိုယူရန်စန်းရီမ အိမ်မှထွက်လာခဲ့သည်။စန်းရီမက ပွဲလမ်းသဘင်အလှုအတန်းသွားလေ့မရှိ။အခု ဦးဘရီအလှုမို့သာ မသွားမဖြစ်၍ စီစဉ်နေရခြင်းဖြစ်လေသည�်. ဦးဘရီကလည်း စန်းရီမကို လာဖြစ်အောင်လာရန်ခေါ်ထားသည်မဟုတ်ပါလား။ စန်းရီမ အပျိုကြီးမစိန်မှီစက်သို့ထွက်၍အလာခြံဝရောက်မှတဖက်မြေကွက်သို့ ခေါင်းငှဲ့ကြည့်လိုက်သည်။သူ့သားဖိုးကုလား ဘုတ်စုတို့အုပ်စုနှင့်ဒိုးပစ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့်စိတ်ချလက်ချ ထွက်လာခဲ့လေတော့သည်။
“ဟယ်….မမစိန်…..အင်္ကျီက ခါးတင်လေးချုပ်ထားတယ်….ဒုက္ခဘဲကျမပြောတာ ခါးရှည်လေ…..” စန်းရီမ အက င်္ျီကို ဖြန့်ကြည့်ရင်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်ပြောလိုက်မိသည်။ “စန်းရီမကလဲ…..အမက ကောင်းမယ်ထင်လို့လုပ်လိုက်တာဟ….ညီးက တင်ကားတော့ခါးတင်လေး ဝတ်ရင်တင်ပါးအလှပေါ်တာပေါ့ဟဲ့….” “အာ……မမစိန်ကလဲ……အဲဒါကြီးကို ဝိုင်းကြည့်နေမှာကြောက်တာ….” “ဘာ….ဘယ်လို….ဟင်း..ဟင်း…..ဟင်း….ဟင်း….” “အဟင်း…..ဟင်း….” ပြောရင်းက နှစ်ယောက်သား တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်၍ ရီလိုက်ကြမိလေသည်။
ကဲပါ….အင်္ကျီချွတ်လိုက်ပြီး ဝတ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး…..တခါထဲလိုတာရှိလဲလုပ်ပေးလိုက်ရအောင်….လာ…အထဲကို….” အပျိုကြီးမစိန်မှီခေါ်ရာ အတွင်းခန်းထဲသို့စန်းရီမလိုက်ပါလာသည်။အထဲရောက်တော့ အပေါ်မှဝတ်ထားသော အင်္ကျီကို စန်းရီမက ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ “ဟယ်….ငါ့ညီမက ကလေးအမေသာဆိုတယ်…..ရင်ဘတ်ကလှတုံးတော့…” စန်းရီမ၏ဘော်လီအင်္ကျီထဲမှ ပြည့်တင်း၍ အစ်ထွက်နေသော တင်းတင်းရင်းရင်းရင်သားအစုံကိုကြည့်ရင်း မစိန်မှီက ပြောသည်။ “ဖိုးကုလားဘဲ……လေးနှစ်ထဲရောက်နေပြီ…..နောက်ပြီး ကိုစိန်ဦးကလဲဒီမှာနေတာမှ မဟုတ်တာ….” “….ဘာဆိုင်လို့လဲအေ့…..” “မမစိန်တို့အပျိုကြီးတွေ…….မသိပါဘူး…..” “ထားပါတော့…..ထားပါတော့….ကဲပါ…..အင်္ကျီကိုဝတ်လိုက်ပါအုံး…” တောသူတောင်သားလဲဖြစ်အပျိုကြီးလဲဖြစ်သော မစိန်မှီတစ်ယောက်ဒီလောက်ပင် ရိုးအလှသည်။အပျိုကြီးမစိန်မှီစကားအဆုံး စန်းရီမက လက်ထဲမှအက င်္ျီအသစ်လေးကို ကောက်၍ ဝတ်လိုက်လေတော့သည်။
…..ဟေ့……သံခဲ…..” “….ဘာလဲကှ…..ခှေးလေး….” “မင်းသိပြီးပြီလား……ဦးဘရီကြီး မိန်းမယူတော့မယ်ဆိုတာ…..” ဒီစကားသံသဲ့ကနဲကြားလိုက်ရတော့ ခြံစည်းရိုးအနီးအဝတ်ထိုင်လျှော်နေသော စန်းရီမက ဘေးမှမြေကွက်လပ်ဖက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်မိသည်။ မြေကွက်လပ်ထဲတွင်အသက်ဆယ့်သုံးလေးနှစ်ခန့်ရှိသော ကောင်လေးသုံးယောက်ခြံစည်းရိုးဘေး သစ်ပင်ရိပ်တွင်ထိုင်ကာ လောက်စာလုံး လုံးနေကြသည်။ “ခွေးလေးရာ…..ဟုတ်မှလဲ…..လုပ်ပါကွာ…..ဦးဘရီကြီးကအသက်လဲကြီးလှပြီဥစ္စာ….နောက်ပီး သူ့မြေးကိုတောင်ဟိုနေ့ကဘဲသက င်္န်းစည်းလိုက်သေးတာ…” “မဟုတ်ဘူး……သံခဲရ….ဦးဘရီက အသက်ငါးဆယ်လောက်ဘဲရှိသေးတာ…
ငါ့အဖေနဲ့ အသကျအတူတူဘဲကှ…..” ဒီတခါဝင်ပြောလိုက်တာက သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရန်ရွံ့တုံးလေးတွေတေပေးနေသူ ချက်စူဖြစ်သည်။ “မင်းကို….ဘယ်သူကပြောလို့လဲ…..ခွေးလေးရ……” ဒီမေးခွန်းကြားလိုက်ရတော့….ဆတ်ကနဲခေါင်းထောင်ကာ နားစွင့်လိုက်သူကတော့ စန်းရီမပင်ဖြစ်လေသည်။ “….မနေ့က ငါတို့အိမ်ကို ဦးဘရီကြီးလာတယ်ကွ….ပြီးတော့ သူအိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း….ငါ့အဖိုးကိုပြောတာ….ငါကြားလာခဲ့ရတာ …သံခဲရ….” “မင်းအဖိုးကို……သူကဘာကိစ္စလာပြောရတာတုံး….” ရွာက အလယ်တန်းကျောင်းမှာ ခုနှစ်တန်းရောက်နေပြီဖြစ်သော သံခဲက စေ့စေ့စပ်စပ်မေးသည်။
“အဖိုးက ငါတို့ကိုတခါကပြောဖူးတယ်……သူတို့ဒီရွာကို ငယ်ငယ်ကပြောင်းလာကြတုံးက အဲဒီဦးဘရီကြီးရဲ့အဖေနဲ့ အတူတူလို့ပြောတယ်…..အရင်ကလည်းဝါကျွတ်ရင်ဦးဘရီက အဖိုးကို လာလာကန်တော့တယ်ကွ……..” ခွေးလေး၏စကားကြောင့်သံခဲက ဘာမှအတွန့်မတက်တော့ပေမဲ့ဘေးမှ ချက်စူက ဝင်၍မေးသည်..ဦးဘရီက ဘယ်သူကိုယူမှာမို့လဲကွ…..” ဒီစကားကြားတော့စန်းရီမလက်ထဲက အဝတ်ကိုဇလုံထဲပစ်ချကာ ကောင်လေးတွေရှိရာ ဖက်လှဲ့၍ သေသေချာချာ နားထောင်လိုက်သည်။ “ငါပြောလိုက်ရင်……မင်းတို့အံ့သြသွားမှာဘဲ….” “ပြောမှာသာပြောစမ်းပါကွာ…..” “ဦးဘရီနဲ့ယူမှာက ဟိုအပျိုကြီး မစိန်မှီလေကွာ…..”
“….ဟင်…” ဒီတခါ ‘ ဟင်‘ လိုက်တာက စန်းရီမဖြစ်ပြီး ဟင်ကနဲ အာမေဋိတ်သံပြုကာ ဆတ်ကနဲထ၍ အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားလေတော့သည်။ ကလေးတွေစကားမို့ယုံရတာခက်ပေမဲ့ယုံချင်စရာကောင်းအောင်လည်း အကြောင်းအချက်က ခိုင်လုံနေလေသည်။ ဒါကြောင့်ဒီလူကြီး အလှုမတိုင်မီတပတ်လောက်ထဲက မတွေ့တော့တာ။အခုအလှု ပြီးလို့ငါးရက်ထိပင်ဖြစ်သည်ဟု စန်းရီမတွေးလိုက်မိသည်။ပြီးတော့ ဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်း ဆက်၍စုံစမ်းကြည့်ရန်စန်းရီမ စိတ်ကူးလိုက်မိလေသည် နောက်တနေ့မနက်…“စန်းရီမ မုန့်တပွဲအကြော်မထည့်နဲ့…..” စန်းရီမ ဟင်းရည်အိုးမွှေနေရာက လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အသက်၅၀ လောက်ရှိသော ဒေါ်ညွန့်ဆိုသူဖြစ်ကြောင်း တွေ့လိုက်ရသည်။
အသံကြား၍ မုန့်စားနေသော မမြိုင်ဆိုသော မိန်းမကြီးကလည်း ဒေါ်ညွန့်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်..“…..မညွန့်…..ဘယ်ကလှည့်လာတာလဲ….” “အော်………ဘယ်သူများလဲလို့မမြိုင်ကိုး……” ပြောလဲပြော မမြိုင်ဘေး ဝါးတန်းလျားတွင်ဒေါ်ညွန့်ကဝင်ထိုင်သည်။ “ရော့…….အဒေါ်…….မုန့်ပန်းကန်…..” စန်းရီမ လှမ်းပေးလိုက်သော မုန့်ဟင်းခါးပန်းကန်ကိုလှမ်းယူပြီး ဒေါ်ညွန့်က မမြိုင်ဖက်သို့ လှည့်၍ကြည့်သည်။
“……မမြိုင်……နင်ကိုဘရီသတင်းကြားပြီးသွားပြီလား….” စန်းရီမ ရင်တွေဒိန်းကနဲခုန်သွားသည်။ “…..ဘာကြားရမှာတုန်း….မညွန့်ရ….မနေ့ကတင်သူ့သားခင်အောင်အိမ်က ထွက်လာတာ…..တွေ့လိုက်ရသေးတယ်……” “…..ဘရီက စိန်မှီနဲ့…..ယူမလို့တဲ့အေ့……” “……ဟေ…..ဟုတ်လို့လား…..” မမြိုင်ပါးစပ်နားရောက်နေသော မုန့်ဇွန်းကို ပန်းကန်ထဲသို့ပြန်၍ချလိုက်သည်။ပြီးမှ မမြိုင်က မုန့်ဇွန်းကိုပြန်ကိုင်လိုက်ပြီး….. “….တပင်လဲလို့တပင်ထူတာပဲအေ….ဘရီမိန်းမ အေးတင်ဆုံးတာတောင် ဆယ်နှစ်လောက်ရှိပြီဘဲ…..” “….မမြိုင်ရာ….ဒီအရွယ်ကြီးကျမှ….မယူဘဲနေလိုက်တော့ဘာဖြစ်မှာမို့လဲ….” “…..အော်….အသက်ကြီးတော့လဲ….ဆေးပေးမီးယူပေါ့အေ့….” ‘ဒင်းတော့နေဦးပေါ့’ ဟု စိတ်ထဲမှ ကြုံးဝါးရင်း စန်းရီမက မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်အိုးအဖုံးကို ဂျိုင်းကနဲမြည်အောင်ပိတ်လိုက်လေတော့သည်။ သန်းခေါင်ကြက်တွန်ပြီ။စန်းရီမ မအိပ်သေးပါ။
အိပ်မပျော်သည်မဟုတ်။တမင်ကို မအိပ်သေးတာဖြစ်သည်။သည်လိုဘဲသန်းခေါင်ကျော်အောင်မအိပ်ဘဲနေခဲ့တာ တပတ်ကျော်ပေပြီ။ အခုသန်းခေါင်ရောက်ပြီဆိုတော့စန်းရီမအိပ်ပစ်လိုက်ရန် စဉ်းစားလိုက်ခိုက်မှာပင်‘ဖေါက်’ဆိုသော အသံလေးတစ်ချက်အိမ်ရှေ့မှ ကြားလိုက်ရသည်။ စန်းရီမ အိပ်ယာမှလူးလဲထကာ ဘေးတွင်အိပ်ပျော်နေသော သားဖြစ်သူ ဖိုးကုလားကို ကြည့်လိုက်သည်။တနေ့လုံး ဆော့ချင်တိုင်းဆော့ထားသဖြင့် အိပ်မောကျနေသည်။စန်းရီမ အသာထ၍ အိမ်ရှေ့သို့ထွက်လာခဲ့သည်။ပြီးတော့ အိမ်ရှေ့တံခါးကိုဖွင့်လိုက်ပြီး ဘေးသို့အသာကပ်၍ လမ်းဖယ်ပေးခိုက်လူတစ်ယောက် အိမ်ထဲသို့လှစ်ကနဲဝင်လာသည်။ စန်းရီမ တံခါးနှစ်ချပ်ကို ပြန်စေ့ကာ ပိတ်ရင်းအိမ်ရှေ့တံခါးပေါက်နားရှိ စဥ့်အိုးပေါ်တွင်တင်ထားသော ဒန်ရေဖလားကို ကြည့်လိုက်မိသည်။
စောစောက ဖေါက်ဆိုသောအသံကထိုရေဖလားကိုလက်ဖြင့်ခပ်ပြင်းပြင်း တောက်လိုက်သောအသံဖြစ်လေသည်။ စန်းရီမ တံခါးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီး နောက်သို့အလှည့်အထဲသို့ရောက်နေပြီ ဖြစ်သော ဦးဘရီက သူမ၏ပုခုံးကိုလှမ်းဖက်လိုက်သည်။ “…..ဘာလုပ်တာလဲ…….ဖယ်ပါ….” စန်းရီမက လက်ဖြင့်အသာပုတ်ချလိုက်ပြီး ဖိနပ်ချွတ်မှနေ၍ အိမ်ပေါ်သို့လှမ်းတက�်.သွားတော့ဦးဘရီကလည်း နောက်ကလိုက်လာခဲ့သည်။စန်းရီမ၏ မပျက်စီးသေးသော နောက်ပိုင်းအလှကို အာသာငမ်းငမ်းကြည့်၍ နောက်မှလျှောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။…..စန်းရီ…..နင်က ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ….” “…..ဘာဖြစ်ရမှာလဲ…..ရှင်လုပ်တာရှင်သိမှာပေါ့….” ပြောရင်း စန်းရီမက အိမ်ရှေ့ခန်းတွင်ပင်ရပ်၍ ဦးဘရီကို မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်သည်။
“…..နင်ကလဲဟာ…ဘာဖြစ်ရတာတုန်း…..ငါဘာလုပ်မိလို့တုန်း……အပျိုကြီး မစိန်မှီကို….ယူတော့မလို့ဆို……” ဦးဘရီရင်ထဲက အလုံးကြီးကျသွားပုံဖြင့် ပြုံးလိုက်သည်။စန်းရီမ၏မျက်နှာကတော့ သုန်မှုန်စူပုတ်၍ေ.ဘာ….ဒါဆိုကျမဆီမလာနဲ့တော့…..မမစိန်ဆီကိုသာသွား….…အော်…….စန်းရီက သဝန်တိုနေတာကိုး……ရှင့်ကိုများ…..ကျမက…သဝန်တိုနေမှာလား….ဝေးသေး…..ဒါဆို….ငါ…စိန်မှီကိုယူမှာ နင်မကြိုက်ဘူးပေါ့…..…ဘယ်သူက မကြိုက်ဖူးပြောလဲ…..ဒါဆို…..ဘာလို့….နင့်ဆီမလာနဲ့လို့ပြောရတာလဲ…….ရှင့်မှာ…..မမစိန်….ရှိနေပြီဘဲ…..ငါက….စိန်မှီကိုသာယူမှာ….ဒါပေမဲ့….ငါက နင့်ကိုဘဲစွဲလန်းနေတာဟ….. သူနဲ့ယူပြီးလဲ…..နင့်ဆီလာနေမှာဘဲ……ဒါဆိုလဲ……ဘာလို့ယူရသေးလဲ…..” စန်းရီမ၏ဒေါသသံက တပြားသားမှလျှော့၍ မသွားပေ။
အမှန်တော့ဦးဘရီက မုဆိုးဖို။စန်းရီမက ကျော်သီဟဆိုသော လင်ကြီးငုတ်တုတ်နဲ့ဖြစ်ပြီး။သူတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေကြတာက တစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီ။ လှသော စန်းရီမကို ကြောင်ဖါးကြီးဦးဘရီက ကြံသည်။လင်သားနှင့်ဝေးနေသော စန်းရီမက ဦးဘရီ၏ညွတ်ကွင်းထဲဝင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်။အခုတော့ဦးဘရီက အပျိုကြီး မစိန်မှီကိုယူတော့မည်ဆို၍ မကျေမနပ်ဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်လေသည်။ မိန်းမတွေများ သူ့မှာလင်ကြီးငုတ်တုတ်နှင့်ကိုတဖက်သားကဘာမှမပြောရှာပေမဲ့ တဖက်သားကျတော့သဝန်ကြောင်တတ်ကြလေသည်။ “…..အသက်ကြီးလာတော့ဆေးပေးမီးယူပေါ့ဟာ…..ကဲ…..ရှင်…ပြန်ပါတော့…….စန်းရီမ….ဒါဆိုငါတစ်ခုပြောမယ်…ငါနင့်ကိုယူမယ်…..ကျော်သီဟကိုကွာပြီး….ငါ့ကို ယူမလား…….ဘာ….ရှင့်….” စန်းရီမ သိသိသာသာငိုင်ကျသွားသည်။ခက်ထန်စူပုတ်နေသော မျက်နှာထားက သိသိသာသာကြီး လျော့ကျသွားသည်။
ဦးဘရီကိုကြောင်၍ကြည့်နေရင်းမှ သူ့မျက်လုံးအကြည့်က ကြမ်းပြင်ဆီသို့ငိုက်ကျသွားသည�်.. စန်းရီမ အရှိုက်ထိသွားပေပြီ။ငြိမ်ကျသွားသော စန်းရီမကိုဦးဘရီက ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပြီး ပါးလေးနှစ်ဖက်ကိုမွှေးကြူလိုက်သည်။ “…..ဘယ်နှယ့်လဲ…..စန်းရီမ…..အကိုကြီး…..နင့်ကိုယူမယ်လေ….” ဦးဘရီ၏ရင်ခွင်ကြီးကို စန်းရီမ မျက်နှာလေးအပ်ပြီး ဘာသံမှထွက်မလာ။ ကျော်သီဟကိုသူမကွာပြီး ဦးဘရီကိုသူမယူလိုက်လျှင်ဆွေမျိုးအားလုံးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးကို ရင်ဆိုင်ရမည်။သားက ပထွေးနဲ့နေရမည်။ပြောမဲ့သာ ပြောရသည်။ကျော်သီဟကိုသူကွာဖို့ရာလွယ်ပါ့မလား။လွယ်တယ်ဘဲထားအုံး။ ဦးဘရီနောက်သူပါသွားလျှင်ဦးဘရီဘက်က အမျိုးတွေက သူမကိုစက်ဆုပ်စွာ ဆက်ဆံကြမည်။စသည်….စသည်ဖြင့်အတွေးသံသရာထဲရောက်နေခိုက် လက်သွက်သောဦးဘရီက သူမ၏နို့အုံတဖက်ကိုလက်ဖြင့်အုပ်၍ညှစ်ရင်း သူမကို လက်တဖက်ဖြင့်ဖက်ထားရာမှ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ထိုင်ချလိုက်သည်။ အလိုက်သင့်လေး ကြမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်အပြီး စန်းရီမက တဆက်တည်းပက်လက် လှန်ချလိုက်သည်။
ဦးဘရီက ပက်လက်လေးဖြစ်နေသော စန်းရီမ၏ပေါင်တံကြီးတွေကို ထဘီပေါ်မှပင်လိုက်လံဆုတ်နယ်ပွတ်သပ်နေခိုက်စန်းရီမက သူမ၏ကိုယ်အပေါ်ပိုင်း ကရင်စေ့အင်္ကျီကို ကြယ်သီးများဖြုတ်ကာ အောက်မှဘော်လီအကျ င်္ီကို ဆွဲလှန်တင်လိုက်တော့ဝင်းမှည့်နေသော နို့ကြီးနှစ်လုံးက ထွက်ပေါ်လာတော့ရာ ဦးဘရီက ငုံ့၍အငမ်းမရစို့သည်။စန်းရီမ မျက်လုံးလေးများမှိတ်၍ငြိမ်နေသည်။ ဒီအတွေ့ ဒီအရသာကိုသူမတောင့်တမျှော်လင့်နေခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလား။ ဦးဘရီက စန်းရီမ၏ နို့သီးခေါင်းလေးကို နှုတ်ခမ်းဖျားဖြင့်ညှစ်၍ ထိပ်ကို လျှာဖျားလေးဖြင့်ထိုးရင်းက စန်းရီမ၏ထဘီကိုလှန်တင်လိုက်သော သူ့လက်ကို စန်းရီမက လက်တဖက်ဖြင့်အုပ်၍ဆုပ်ကိုင်လိုက်လေသည�်. “…..အကိုကြီး…..စန်းရီကို….ပြစ်မထားရဘူးနော်….” ဦးဘရီက နို့သီးကိုနှုတ်ခမ်းဖျားမှ မလွှတ်ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ဒီတော့မှ စန်းရီမက သူ့လက်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ရာ ထဘီကိုဆက်၍လှန်တင်လိုက်သည်။
အုံကောင်းသော အမွှေးနက်များကိုလက်ဖဝါးဖြင့်ပွတ်လိုက်တော့ ဇီးကင်းလောက်စောက်စေ့လေးက ထင်းကနဲပေးလာသည်။လက်ညှိုးထိပ်လေးဖြင့် ဦးဘရီတို့ထိလိုက်သည်။စန်းရီမ တွန့်ကနဲတချက်ဖြစ်သွားပြီး စအိုလေးကို ရှုံ့လိုက်မိသည်။ စောက်စေ့လေးက ပျော့၍မနေ။မာ၍ တောင့်တောင့်လေးဖြစ်နေသည်။ ဆက်ပြီး အောက်ဖက်ကိုလက်ဖဝါးထိုး၍ပွတ်လိုက်တော့ တင်းတင်းလေးဖေါင်းနေသော နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားမှအရည်ကြည်လေးတွေက စို့ထွက်နေကြပြီ။ ဦးဘရီပုဆိုးကိုခေါင်းပေါ်မှ လှန်ချွတ်လိုက်တော့စန်းရီမ မျက်လုံးအစုံက ဝင်းကနဲလက်သွားသည်။ဦးဘရီအသားက မမဲပေမဲ့လီးကြီးက မဲမဲကြီး ထောင်ထနေသည်။၉၀ ဒီဂရီတော့မတ်၍မနေပါ။အသက်အရွယ်ရနေပြီမို့၄၅ ဒီဂရီလောက်တော့ထောင်၍နေသည်။ဒါပေမဲ့ဒါကြီးက ဘယ်လောက်မာကျောကြောင်း စန်းရီမ ကောင်းကောင်းသိသည်။
စံချိန်မှီအောင်မထောင်နိုင်ပေမဲ့စံချိန်မှိအောင်တော့ မာကျောလှသည်။ “……ခါတိုင်းလိုဘဲ…..မှောက်ပေးပါလားဟာ…..” “…….အို…..အကိုကြီးကလဲ….မလုပ်တာကကြာပြီး…..လုပ်လုပ်ခြင်းမှောက်လိုက်ရင်…. တအားနာတာဘဲ…ပက်လက်ပဲစလုပ်လိုက်အုံးနော်…..” ပြောလဲပြော စန်းရီမက ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုကား၍ပေးလိုက်တော့ဦးဘရီက ပေါင်ကြားထ�ဲ ဝင်ကာ နေရာယူလိုက်ပြီး အမောတကော လီးထိပ်ကိုစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခု ကြားသို့ထောက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့စန်းရီမ၏မျက်နှာလှလှလေးကိုလှမ်းကြည့်၏ ဒီလိုကြည့်မှန်းသိတော့မျက်တောင်ကော့ကြီးတွေခတ်ရင်း သူ့ကို ပြုံးယောင်ယောင်လေး မျက်စောင်းတချက်ထိုးကာ တဖက်သို့လှည့်သွားသည်။ နေရင်းထိုင်ရင်း တရှုးရှုးဖြင့်အသက်ရှုပြင်းလာသော ဦးဘရီက လီးထိပ်ကို ဗြုံးကနဲဖိသွင်းလိုက်သည်။
…ဗြစ်…..ဒုတ်……..အ…..ဟ……ဟင်… စန်းရီမ လည်ပင်းကြောလေးတွေထောင်တက်သွားပြီး ဗြုံးကနဲ အသက်အောင့်လိုက်ရာ မှ ‘ဟင်း’ ကနဲသက်ပြင်းချလိုက်သည်။ ဦးဘရီ၏လီးကတော့စန်းရီမ၏စောက်ခေါင်းထဲတဆုံးဝင်၍သွားချေပြီ။ဦးဘရီက လီးကို အကုန်ဆွဲမထုတ်တဝက်လောက်ထုတ်ထုတ်ပြီး အားပါးတရဆောင့်၍လိုးသည်။ ပြီးတော့လက်တဖက်က စန်းရီမ၏ဘေးတွင်ထောက်ထားပြီး ကျန်လက်တဖက်က စန်းရီမ၏နို့တလုံးကိုဆုပ်နယ်ပေးသည်။ စန်းရီမအလိုးခံရင်း မချင့်မရဲဖြစ်လာပြီး ကားထားသောခြေထောက်နှစ်ဖက်မှ ခြေသလုံးနှစ်ဖက်ကို ဒူးထောက်ထားသော ဦးဘရီ၏ဒကောက်ခွက်သို့လှမ်းချိတ်၍ အားယူကာ စောက်ပတ်ကို ကော့ကော့တင်သည်။ညှစ်သည်။
ဦးဘရီအရသာတွေ့လာပြီး အားကြိုးမာန်တက်ဆောင့်သည်။ …..စန်းရီ……ဘာလဲ……မှောက်ပေးတော့ဟာ……..အာ…ဒီမှာ…အသားကျနေတဲ့ဟာ….…လုပ်ပါဟာ…..နင့်ဖင်ကြီးကိုကုန်းပြီး…..လုပ်ချင်လို့ပါ……အကိုကြီးကလဲ…ဒီမှာက….ကဲပါ….ဖယ်……” စန်းရီမ သိပ်ပြီးစိတ်မရှည်နိုင်တော့ပေ။ဦးဘရီက စောက်ခေါင်းထဲမှလီးကိုထုတ်ကာ နောက်သို့အဆုတ်လိုက်စန်းရီမက ဆတ်ကနဲဝမ်းလျားမှောက်လိုက်ပြီး ကုန်း၍ထသည်။ခန္ဓာကိုယ်ရှေ့ပိုင်းကတော့လက်ကိုဆန့်၍မထောက်ဘဲတတောင်ဆစ်ဖြင့်သာ အားပြုကာထောက်ထားလေရာ ကိုယ်အရှေ့ပိုင်းက နိမ့်၍ နောက်ဖက်ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးတွေက လုံးတစ်ကားစွင့်၍ မြင့်တက်ကာ အတော်ပင် မက်မောစရာကြီးဖြစ်နေသည်။
ဒါ့အပြင်စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားဖေါင်းဖေါင်းကြီးတွေက စူ၍ထွက်နေပြန်တော့ဦးဘရီတယောက်ဘဝင်ခိုက်၍ ရှေ့သို့ဗြုံးကနဲ တိုးကာ ဖင်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်စုံကိုင်လိုက်သည်။ “….လုပ်မှာ…လုပ်လေ…အကိုကြီးရာ…..” စန်းရီမက သံရှည်မြှင်းမြှင်းလေးဆွဲ၍ ညုပြောလေးပြောကာ ဖင်လုံးကြီးကိုလည်း တချက်လှုပ်လိုက်သည်။ ဦးဘရီလက်တဖက်က စန်းရီမ၏ခါးကိုကိုင်ပြီး၊ကျန်လက်တဖက်က သူ့လီးကိုကိုင်ပြီး နောက်သို့စူထွက်နေသော စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားသို့လီးကိုတေ့ကာ ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။
“…….ဗြစ်…..ဖွတ်…ဖွတ်…..အမေ့…..ဟင်း…..အရမ်းကြီးဘဲ….ကျွတ်….ကျွတ်……” “…….နာလို့လား….စန်းရီ…….” “……ကဲပါ……လုပ်မှာသာလုပ်စမ်းပါ….” ဟုတ်တယ်လေ။စိတ်မရှည်နိုင်တော့ဘူး။စောစောကအရသာတွေ့နေတုန်း သူမကို မှောက်ခိုင်း၍လီးချွတ်လိုက်ရတော့အရသာပျက်သွားသည်။အခုလည်း ဇိမ်ဆွဲနေသည်။ ဦးဘရီက စန်းရီမ၏ခါးကိုဆွဲ၍ ဆွဲ၍ဆောင့်လိုးသည်။စန်းရီမကလည်း ဖင်ကြီးကိုလုံးကျစ်၍ နောက်သို့ထိုးထိုးပေးရုံမျှမက အားနှင့်လည်း ရသမျှညှစ်ညှစ် ပေးသည်။ဦးဘရီကတော့သဘောတွေ့မနောခွေ့နေသည်။ ဒါကြောင့်လဲတခုလပ်နဲ့အပျိုစင်ဘယ်ဒင်းသာလို့ဟန်လို့ဆိုတာပေါ့လို့ ဦးဘရီတွေးမိသည်။စန်းရီမက တခုလပ်မဟုတ်ပေမဲ့လီးအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိ၏။ဘယ်လိုခံရမည်ကိုသိနေသောသူဖြစ်သည်။
“……ပလွတ်…..ပလွတ်…..ဖွတ်….ဒုတ်….အင့်….အင့်…အ….အား… …ပလွတ်….ဇွတ်…..ဗွတ်……ဗြစ်…..အင့်…..ပလွတ်……….” “……ကောင်းလား…..စန်းရီ….” “…..မမေးနဲ့လို့ပြောထားတာမမှတ်မိဘူးလား……” ဦးဘရီအသံတိတ်ကာ အံကြိတ်ပြီး အားပါးတရခါးကိုကိုင်ကာဆောင့်၍လိုးသည်။ ဆောင့်အားကြောင့်တုန်တုန်သွားသော စန်းရီမ၏ဖင်သားလုံးများကိုကြည့်ရင်း ဦးဘရီမှာစောက်ပတ်ညှစ်အားကလည်း ကောင်းလှသည်မို့ ပြီးချင်စိတ်ပေါက်လာသည်။ထိုအခိုက်မှာပင်စန်းရီမကလည်း ရှေ့ဖက်ကထောက်ထားသော တတောင်ဆစ်နှစ်ဖက် ကိုကျားကန်၍ထောက်ကာ ဖင်ကြီးကိုနောက်သို့ပစ်ကာ တန်ပြန်ဆောင့်ကာ သိသိသာသာကြီး ပြန်ဆောင့်ပေးလာသည်။
စန်းရီမပြီးခါနီးလျှင်ဒီအတိုင်းဖြစ်လာတတ်သည်ကို ဦးဘရီက သိပြီးသား။ သူကလည်း ပြီးချင်လာပြီမို့မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ပြီး စန်းရီမ၏ခါးကိုညှစ်ကာ အသာကုန် အချက်(၂၀)မျှ ဆက်တိုက်ကြီးဆောင့်လိုက်ပြီး သုတ်ရေများကို စန်းရီမ၏စောက်ခေါင်း ထဲသို့ပန်းသွင်းလိုက်စဉ်စန်းရီမ၏စောက်ပတ်အတွင်းမှ ကြွက်သားများကလည်း ဦးဘရီ၏လီးထိပ်ကြီးကို ဝိုင်းဝန်းညှစ်လိုက်လေတော့သည်။ဦးဘရီလီးတန်ကြီးကို တချက်၊နှစ်ချက်မျှ ဆောင့်လိုက်၍စန်းရီမ၏လက်နှစ်ဖက်မှာလည်း ကွေးကနဲ ဖြစ်သွားပြီး သူမ၏ကိုယ်ကြီးမှာ ရှေ့သို့တိုး၍ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ငြိမ့်ကနဲမှောက်လျက် ကျသွားပါတော့သည်…..ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged စှဲလမျးနတော